AVG Internet Security Business Edition 2012 12.0 Build 2126a4890 (x86/x64)...! | အိမ်လွမ်းသူ...
AVG Internet Security Business Edition 2012 12.0 Build 2126a4890 (x86/x64)...!
ကျွန်တော် ဒီနေ့ AVG Internet Security Business Edition 2012 12.0 Build လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...!Update လေးထွက်လာလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ...!သူငယ်ချင်းတို့ အသုံးပြုရတာ အဆင်ပြေအောင်လို့ Serial Key လေးတွပါထည့်ပေးထားပါတယ်...!32Bit & 64 Bit နှစ်ခုလုံးတင်ပေးထားပါတယ်...!ဖိုင်ဆိုဒ်တွေကကြီးနေတော့ ခွဲပြီးတင်ပေးလိုက်ရတာပါ...!ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 32Bit မှာ 152.24 MB & 64 Bit မှာ 173.7 MB ရှိပါတယ်...! ကျွန်တော် Media Fire လေးဖြင့် အောက်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်...!
32 Bit အတွက်...
64 Bit အတွက်...
1 Response to AVG Internet Security Business Edition 2012 12.0 Build 2126a4890 (x86/x64)...!
ငါလည်း AVG တော့ကြိုက်တယ်.. သူက တော်တော်ပေါ့တယ်.. Scan ဖတ်လည်း အချိန်အများကြီး မယူဘူး.